Rosia, tafakatra amin’ny toerana faharoa erantany amin’ny fangatahana fanesorana votoaty ao amin’ny Twitter · Global Voices teny Malagasy
10.448 ireo fangatahana fanesorana nataon'ireo andrimpanjakana rosiàna
Voadika ny 02 Febroary 2022 15:20 GMT
Vakio amin'ny teny English, Português, русский, українська, Español, Ελληνικά, English
Sary an'i Gerd Altmann tao amin'ny Pixabay, Pixabay license.
Tarehimarika nanamontsana ny hatrizay no nasehon'ny “Twitter”, ilay sehatra fanoratana bilaogy bitika momba ireo fangatahan'ny fanjakàna hanesorana votoaty nandritra ny tapany faharoa ho an'ny taona 2021, araka ny tatitry ny mangarahara farany navoakan'ilay orinasa.
Nandritra io vanimpotoana io, niisa 43.387 ireo fangatahana fanesorana votoaty napetrak'ireo governemanta manerantany, ho ana kaonty Twitter niisa 196.878 – ny tarehimarika ambony indrindra hatramin'ny 2012 nanombohan'ny Twitter namoaka ireo tatitry ny mangarahara. Ireny fangatahana ireny dia fanampin'ireo 12.370 nangatahan'ireo andrimpanjakana ny mombamomba ireo mpampiasa na ny kaonty.
Dimy amby sivifolo isanjaton'ny fitambaran'ireo fangatahana fanesorana votoaty no avy amina firenena dimy monja: Japàna, Rosia, Tiorkia, India ary Korea Atsimo. Ampiasain'ny Twitter ity fandrefesana ity mba hanisàna ireo “fangatahana ara-dalàna”, izay faritany ho toy ny “fifangaroana didim-pitsarana amina fangatahana ofisialy hafa mba hamafàna votoaty, na avy amin'ny rantsan'ny governemanta izany, na avy amin'ireo mpisolovava misolo tena olontsotra.”
Fangatahana famafàna avy any Rosia teo anelanelan'ny 2012-2021. Pikantsary tao amin'ny Twitter.
Japàna no mbola be fangatahana indrindra, manana ny 43 isanjato amin'ny fangatahana voaray erantany. Rosia no tonga eo amin'ny faharoa manaraka an'i Japàna ary manana ny 25 isanjato amin'ireo fangatahana fanesorana erantany teo anelanelan'ny Janoary-Jona 2021.
Niisa 10.448 ireo fangatahana fanesorana votoaty nalefan'ireo andrimpanjakana rosiàna – tarehimarika ambony indrindra ho an'ilay firenena ary fitomboana 56 isanjato raha ampitahaina amin'ny enimbolana voalohany teo aloha (Jolay-Desambra 2020), fotoana nametrahan'i Rosia fangatahana niisa 6.351. Hita tao anatin'ireo fangatahana fanesorana votoaty ny didim-pitsaràna 438 sy “fangatahana ofisialy hafa” niisa 10.010.”
Mihoatra ny roa ampahatelon'ireo fangatahana nataon'ny governemanta rosiàna mba hanesorana votoaty (71 isanjato) no votoaty lazain”i Rosia fa manitsakitsaka ny lalàna ao an-toerana mandràra ny fampiroboroboana ny famonoana tena. Twitter dia manondro amin'ny ampahany ny lalàna rosiàna ho antony nampitombo ny isan'ireo bitsika erantany nogiazana: mihoatra ny 52 isanjato amin'ireo bitsika rehetra nogiazana ao anatin'ity vanimpotoana nanaovana tatitra ity no mahatafiditra votoaty mifandray amina fampiroboroboana famonoana tena ao Rosia.
Voalaza fa nomen'ny Twitter valiny nahafa-po ny 47 isanjaton'ireo fangatahan'i Rosia hanesorana votoaty, kaonty 76 no nogiazana ary bitsika an'olontsotra niisa 5.345 (nahatonga azy ireny ho tsy azon'ireo mpampiasa avy ao Rosia nojerena), hatramin'ny fampiatoana kaonty 1.309 (an'ireo izay voatanisa ao anatin'ireo fangatahana) noho ny fanitsakitsahana ny fepetra manokana napetrak'ilay sehatra ho amin'ny fampiasàna azy.
Nomarihan‘ilay sehatra fanoratana bilaogy bitika ihany koa ny fironana tsy mitsahatra ananan'ireo fanjakana amin'ny fikendrena ireo kaonty voamarina fa ana mpanao gazety sy mpilaza vaovao. Na nisy fidinany 14 isanjato aza tamin'ny enimbolana voalohan'ny 2021 ireo kaonty lasibatry ny fangatahana famafàna hatramin'ny namoahana ilay tatitra teo aloha, 172 ireo kaonty voamarina fa ana mpanao gazety sy mpampita vaovao erantany no niharan'ny fangatahana fanesorana votoaty niisa 231, ka tao anatiny ireo fangatahana 40 araka ny lalàna voaray avy any Rosia. Amin'ireo bitsika 11 nogiazana, nalefan'ireo mpanao gazety sy mpampita vaovao, bitsika valo no nigiazana avy any Rosia noho izy miaty torohay momba ny fomba famonoana tena, ary ny iray dia noho izy nizara votoaty mifandray amin'ny fanaovana an-tendrony.
Sinead McSweeney, filoha lefitra misahana ny politika ankapoben'ny Twitter sady mpanao soa ny hafa, nilaza tao anaty fanambaràna iray fa :
Fanamby tsy mbola nisy hatrizay no atrehantsika satria tsy mitsahatra ny manandrana mitsabaka sy manaisotra votoaty ireo governemanta erantany. Io ambana manjo ny fiainana manokana sy ny fahalalahana maneho hevitra io dia fironana faran'izay mampanahy ilàna ny fifantohan-tsaina tanteraka avy amintsika.
Tao Rosia, niatrika ireo tsindry, sazy ara-bola sy sivana avy amin'ny governemanta ny Twitter noho ny fiampangana azy ho tsy namafa ireo votoaty lazaina fa tsy ara-dalàna, isan'ireny ireo famoahana mifandraika amina famoriana vahoaka sy fihetsiketsehana tsy nahazoana alàlana. Tamin'ny Martsa 2021, natombok'ireo Rosiàna mpanivana ny fameperana ny hafainganam-pandehan'ny Twitter tamin'ny alàlan'ny fampiasàna fitaovana DPI (deep-packet inspection) nampiasainy tao anatin'ny fenitry ny tetikady vaovao “fiandrianam-pirenen” i Rosia. Tamin'izany fotoana, nilaza ny Roskomnadzor, mpandrindra ny aterineto sy ny fampahalalam-baovaom-panjakana fa mety hosakanana tanteraka ao amin'ny firenena ilay sehatra raha toa tsy “manome fahafahafam-po” amin'ireo fangatahana ataon'ny Roskomnadzor, sy ireo fepetra takian'ny lalàna rosiàna.”
Makedonia 2 andro izay
Makedonia 6 andro izay